Mana Oromoo Swiss: Badii Shanee gumii dalagaa jirtu, Jaal Dhugaasaa Bakakkoo bar 2004 ibsaniijiru.
At 9:39 PM, Oliiqaa Dingil said...
Jaale Dhugasaa bakakkoo miseensa shane gumii turan kun seenaa dha.
Qabsoon Oromoo gandummaan hoganuun habisuun obbo Dhugasaa,Galasaa,Abiyyuu faa yoo dalnsiisee qabsoo irratti shira yoo yaachise.
Farri qabsoo bilisummaa gandummaan ijaramuu dha.
Olatummaa gandaa Oromoon eeguuf sammuu ittiin iyyamu hin qabu.
Qabsoo bilisummaaf yaaduuf yoo ta'e waggaa ja'a guutuu oduu intrneetii ala waan tokko hin agarre.
Qabsoon oromoo warra abbaa gandaa irraa bilisa ba'uun qabsoo oromoof waan tokko otoo hin dabaliin tarkafii tokko.
Dhimmo Oromoo dhimma Gaafa Aafirkaa ta'ee dhimma Gaafa afirkatti kan hidhame qabsoo warri abbaa gandaa gegessaa jiraniin miti.
Dhimma Sumalee fi Wayanee keesatti ABOn sababa
Dhimma keenyaa fi Wayanee ABOn sababa
Dhimma Ertiraa fi Wayanee keesatti ABOn sababa kanaaf maddi waruma tufachuu yaadu sanatu hojachaa jira.
arabaa fi hojiin tokko miti.
Afaniin Gooti eenyu akka ta'e Oromoon hunduu ni beekan.Afaan keesan nurraa cufadhaa!
At 1:59 AM, OLF/ABO said...
Dhugaan ragaan qabatamee yoo dubbatamu caala ifa. Dubbiin dhugaa of keessaa hin qabne garuu taajjaba dabala malee homaa hin fidhu. Ni fokkisa.
Ilaalcha Obbo Oliiqaa Dingil armaan olitti dubbatan tokkotu na ajaa'ibsiise. “Gandummaa“ kan jedhu tokko kaasuun isaanii na kofalchiise. Dhugaa dha gandummaan murna kam keessatti calaqisa yoo jenne kan sabni Ormomoo beekudhaatii ani kanaaf isaan hin komadhu. Garuu haqni jiru faalla isaan dubbataniitti. Oromoo keessatti kana dhubbachuu isaanii bakka isaanii na qaanesse.
Ka biraan “rakkoo Sumaalee, rakkoo Ertiria, rakkoo Kaanyaa keessaatiif maal maal…“ kan jedhaniifis kan itti of of waamuu barbaadu warruma Shanee gumii akka ta'e namuu ni beeka. Mee ragaa tokkon isiniif kaawa. Utuu namuu waayee rakkoo Sumaalee fi Habashaa hin haasa'in Obbo Leencoo Baatii maal akka jedha. "Sumaaleen bakka Owwaalcha loltuu Humna waraanaa Mallas Taati!!!" jechuun Raadiyoo Ameerikaa irratti akka bakka bu’aa itti gaafatama waraana Somaalee of godhuun; Somaalotallee dura dhaadannoo akkasii kana addunyaa dhageessisaa turuun isaanii Oromoota hedduu kan ajaa'ibsiisee fi kan arse sagaleen isaanii ragaan jirudha. Dhimma Oromoo sirnaan dubbachuu kan hindada’in Obbo Leencoon waayee sumaaleetiif somaaleen dura ibsa akkanaa kennuun isaanii, Oromoof maal bu’aa buusa laata? Egaa mee waaqaaf jedhaatii eenyutu qabsoo keenya kana kan halagaatiin walitti qabsiisuuf dhama'aa jira laata?
Lammafaan rakkoo Ertiria jettaniifis Ilmaan Oromoo qabsoo Oromootiif mana baatee daangaa Ertria eeguuf achitti akka dhumtu kan gochaa jiru eenyu dha? Shanee gumii mitii laata?
Har'a ammoo ammas Ilmaan habashaatiif wabii dhaabbachuudhaan hidhamtoota Amaaraatiif iyyuun shanee gumii Oromoo qaanessaa jira. Rakkoon Oromoo irraanfatamee; rakkoon Ethiopia shanee gumiitiin lallabamaa jiraachuun isaa egaa qabsoo yoo ta'e; lakkii kun nu hinbaassuu isinii jenna.
Rakkoo Shanee gumii ofumaan uumee itti Oromoo cubbisuuf dhama’u kunis kan yoo jiraateellee, akkas nuun jechuu danda’uu dhaan qofa sodaa; diinatti harka kennuunii fi kaayyoo Adda Bilisummaa Oromoo ganuun fala miti. Falli saba ofiin mar’achuu saba ofii dhaga’uun deemuu qofa.
Hundaafuu ija uummata Oromoo jalaa dhokachuun soba. Mee maal dhibdii dhiisaatii ija haa saaqqannu. Karaa dhugaatti deebinee Oromoof haa dhaabbannu. Bu’aa shanee gumii Oromoof buuse jettanis fuuluma kana irratti ni argattuutii yoo ija qulqulluu qabaattan dubbisaan isiniin jedha.
Tokkummaan humna. Dhugaan haa mo’u!!!
Yeroo ammaa kana haalli mooraa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti deemaa jiru kun waldadhabsiisuun diinaaf karaa banuu yoo tahe malee faayidaa hin qabu. Inni guddaan qabsoo Oromoo ganda lama sadiitti hiruun jireenya ABO gaaffii keessa galchee jira. Kanaaf Oromoon kan beekuu qabu ofumaa haala addaan gurmaahee biyya keessatti socho'uu qaba malee jarreen gandaan walhirtee haasaftu kun bilisummaa naaf fiddi jedhee eeguu hin qabu. Nama biraa bilisoomsuuf dura gandummaa irraa of bilisoomsuun baay'ee barbaachisaa dha.